भुर्तेल मलाई ‘राक्षस’ लाग्छ | samakalinsahitya.com
‘‘किन चाहियो फोन नम्बर ? अफिसको काम अफिसमा...?’’
उसले ङिच्च दाँत देखायो । मेरो स्पष्ट र झर्किएको जबाफले पनि ऊ रिसाएन । फेरि बोल्यो— ‘‘सरले हाम्रो लागि यत्रो काम गर्नुहुन्छ, हामीले पनि त सरका लागि केही गर्नुप¥यो नि...!’’
नजिकै हाम्रो कुरा सुनिरहेको, मभन्दा एक तहमाथिको रमेश भुर्तेल थियो— यतै हेर्दै, कान ठाडो पार्दै, मानौँ मलाई घुर्दै । सायद यसैले सिकायो होला— ‘भन् न, के थाहा, पैसाले महादेवका त तीन नेत्र बल्छन् भने यसका त...!’
‘‘आ, छाड्दिनुस् सर ! म जे छु, जस्तो छु ठीकै छु ।’’ रमेश भुर्तेलको साह्रै कचकचपछि बोल्नैपरे यति बोल्थेँ । के गर्नु ? आफ्नो टाउकोमा छ, नत्र त ‘गधा’ भत्र हुन्थ्यो, पाजी भत्र हुन्थ्यो, साले, चोर, फटाहा, भ्रष्ट भत्र हुन्थ्यो । आफ्नो टाउकोमा भएकाले ‘सर’ भत्रैप¥यो । जागिर खाएपछि अनुशासन तोड्न पनि सक्तिनथेँ । मलाई थाहा थियो ऊ भ्रष्ट छ तर ‘भ्रष्ट’ भनेर कुनै कानुनले प्रमाणित नगरुन्जेल, भनौँ न भ्रष्ट भनेर ऊविरुद्ध कुनै कारबाही नचलुन्जेल, जागिर नखोसिउन्जेल मैले उसलाई टाउकोमै बोकिरहनुपर्ने भयो । ‘सर’ नै भनिरहनुपर्ने भयो । ऊप्रति सम्मान, आदर जेजे प्रकट गर्नुपर्छ, गरिरहनैपथ्र्यो । उसले अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गले घुस्याहा हँुदै भ्रष्ट आसामीको पाउ मोलिरहेको देखिरहे पनि नदेखेझैँ गरिरहनुपथ्र्यो मैले, जबसम्म ऊ ‘भ्रष्ट’ मा आरोपितपछि बर्खास्त हुन पुग्दैनथ्यो । त्यसरी बर्खास्त हुनु, हाम्रो यो अहिलेको परिवेशमा त मानौँ, उही ‘दिल्ली दूर है...!’
‘‘छैनछैन, मेरो टेलिफोन नम्बर...! टेलिफोन भए पो टेलिफोन नम्बर बताउनु...!’’
‘‘च्चच्चच्च...! सर, अधिकृत भएर पनि एउटा टेलिफोन छैन घरमा ? मानिसका घरमा दुइटा, तिनोटा टेलिफोनले नपुगेर हातहातमा मोबाइल छन् । उः हेर्नुस् त भुर्तेल सरलाई...!’’
त्यसै बेला भुर्तेल सरको मोबाइलको घण्टी बज्यो टर्र, टर्र— नमीठो भ्यागुताको टर्रो बोलीझैँ लाग्यो मलाई त्यो घण्टी...!
भुर्तेल सर हँसिलो मुद्रामा भगवान् आसामीपट्टि आँखा चम्काउँदै फोनमा बोल्न थाल्यो— ‘‘केदार साहू... हुन्छ, हुन्छ... त्यति जाबो कुरा किन नमिल्ने... ल– ल भइहाल्छ... चिन्ता नलिनुस् न, तपाईंको काम हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ..., आ, छाड्नुस्, तपाईं त हाम्रो लागि भगवान् हो... बाई... भरे भेटौँला नि...!’’
‘तपाईं त हाम्रा लागि भगवान् हो’ शब्दले मलाई बेसरी झम्टिरहेको हुन्छ । आसामीको तलुवा चाट्दै, आफ्नो स्वार्थ साध्दै, आपूm काम गरेको संस्थालाई चाहिँ धराशयी पार्दै हिँड्ने यो भुर्तेल मलाई ‘राक्षस’ लाग्छ । तैपनि बोल्न सक्दिनँ । थिति बिग्रिएको छ, आफ्ना कुरा कतै राख्न सकिँदैन । युनियनहरू छन्, युनियनका ठूलठूला कुराहरू छ्रन् । सिद्धान्ततः युनियनहरू भ्रष्टाचारविरोधी छन्, तर व्यवहारमा...? युनियनलाई नभनौँ रे तर युनियनमा डाडु–पनिउँ पक्रेर बस्ने शिवकुमार एक नम्बरको भ्रष्ट छ । सबैलाई थाहा छ, ऊ व्यवस्थापनसित दलाली गर्छ र दलाली खान्छ । रामेश्वरजी भद्र हुनुहुन्छ, इमानदार पनि तर सोझो भएकाले उहाँलाई सबैले उडाउँछन् । कसको आस गरूँ ? व्यवस्थापक ? कार्यालय प्रमुख ? उनीहरूलाई पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउन पाए पुग्यो । घर बन्दै छ, घरमा आसामीसित सिमेन्ट र छड सित्तैँमा झिकाउन पाए पुग्यो ।
‘‘आ, तपाईं त सारै भएन, हेर्नुस् त भगवान्जीले पनि मुखै फोडेर हियाउनुभयो । एउटा यस्तै मोबाइल लिनुस् । पछि घरमा फोन राख्दै गर्नुहोला...!’’
‘‘यस्तै हो हाम्रो श्यामजी ! उहाँको कामलाई चाहिँ मात्रैपर्छ, बुझ्नुभो भगवान्जी ! बिचरा सारै भलादमी हुनुहुन्छ हाम्रो श्यामबाबू...।’’
मैले आफ्नाबारे भुर्तेललाई सबै कुरा खुलस्त राखेको थिइनँ; राख्ने आवश्यकता ठानेको पनि थिइनँ । आफ्नो सोचविचार र हृदय मिल्नेसित मात्रै म खुल्थेँ । श्रीमतीले अरू सन्तानको लालसा राख्दाराख्दै पनि मैले एउटै छोरीमा चित्त बुझाएको थिएँ । श्रीमतीलाई पनि चित्त बुझाउन कर गरेको थिएँ । बाआमा पहाडमै हुनुहुन्छ, फोन पनि नपुग्ने ठाउँमा । बेलाबेला चिठी लेखेर मनका कुरा पोख्थेँ । कर्तव्यपालन र असमर्थताका कुरा पोख्थेँ । बा पनि अक्षर चित्रे र कनीकुथी लेख्न सक्ने भएकाले बाले लेखेको चिठी बेलाबखत प्राप्त गर्थें । ‘तँ हाम्रो चिन्ता नगर् ! पहाडको हावापानी, जन्मे–हुर्केको ठाउँ, राम्रो छ हामीलाई, पीर नलिएस् । एउटी नातिनी छे, राम्रोसित पढाएस् । तेरी आमाले पनि सोधेकी छे तँलाई, बुहारीलाई, नातिनीलाई...!’
‘आउनुस् न यतै’ भन्दा पनि ‘अलिकति भएको जेथा पनि चाटचुट छोडेर कसरी आऊँ ? बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन’ भत्रुहुन्छ बा...! सहरमा जागिर छ, घर छैन; भाडाको जिन्दगानी छ । आउनुस् न बाआमा यतै भने पनि ‘पुर्खाको थलो कसरी चटक्क छाडूँ’ भनेर मात्रुहुत्र बा । तर मलाई लाग्छ, यस सहरमा मेरो आफ्नो घरघडेरी नभएकाले नमात्रुभएको हो बाले । जेजस्तो भए पनि आफ्नो घरमा बसिराख्नुभएका उहाँहरूले अरूको घरआँगनमा कसरी खुम्चिएर बस्न सकिएला ? भनेर पनि नमात्रुभएको हुन सक्छ— यस्तो पनि लाग्छ मलाई ।
‘‘यो अफिसले तपाईंलाई के दिन्छ ? खर्चको वास्ता नगर्नुस्, तपाईं खालि यो फाराम भरिदिनुस् । बाँकी काम हाम्रो । पर्सि तपाईंको जेबमा मोबाइल...!’’
‘‘मलाई कित्र खोज्ने ? हेप्ने तिमी ? तुरुन्त बाहिर गइहाल...!’’
रामदाजुले पुलुक्क मेरो आँखामा हे¥यो । उसका आँखा रिसाएका जस्ता थिए । भन्यो— ‘‘किन, राजाको सवारीमा पनि जान पाइँदैन...?’’
मैले जबाफमा केही भनिनँ । मन त थियो धेरै कुरा भत्रे— ‘के राजाले जनताको काम रोकेर तपाईंलाई सवारीमा आउन कार्ड पठाएको थियो ? कि तपाईं नगए राजाको स्वागतसत्कारमै बाधा पथ्र्यो ?’ तर प्रकटमा ऊ तिलमिलाएको देखेर मुसुमुसु हाँसिदिएँ । फेरि अलिकति गिज्याएँ— ‘‘अनि राजाको सवारी त अस्ति थियो, हिजो नि...?’’ म भत्र चाहन्थेँ— ‘राजाको सवारी त अस्ति थियो । हिजोचाहिँ के भएर नआउनुभएको नि ?’
यसपल्ट ऊ प्रस्टै रिसायो । झ्वाँक देखाएरै बोल्यो— ‘‘बिरामी हुन पनि नपाइने ? बिरामी भएँ, के गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुस्...।’’
उसले सिफरिसपत्र लेखिसकेर मेरो हातमा थमाइदियो र हात थाप्यो— ‘‘तीस रुपियाँ...!’’
अचानक मैले देखेँ, थुप्रै हातहरू प्रकट भए— कसैका हातमा पाँच रुपियाँ, कसैका हातमा दस रुपियाँ, कसैका हातमा बीस रुपियाँ...!
म घचेटिएँ । बाहिर पुगेपछि हिँडेँ पनि तर मैले औँलो ठड्याउँदै भनेँ— ‘‘अहिले मलाई हतार छ तर म फेरि आउँछु । सीताराम काका ! तपाईंको पैसा फिर्ता गर्न र रामदाजुसित हिसाब चुक्ता गर्न म फेरि आउँछु....।’’